Iindaba -IHalliburton entsha yokugrumba i-hybrill yonyusa uzinzo, ukusebenza kokomba
Intaba entsha yeHoribiburton yokugrumba iyonyusa uzinzo, ukusebenza kokomba
IHOUSTON- Inkampani yaseHalliburton yazisa ngeCrush & Shear Hybrid Drill Bit, itekhnoloji entsha edibanisa ukusebenza kakuhle kwabasiki bemveli be-PDC ngobuchule bokunciphisa amandla e-rolling element ukunyusa ukusebenza kokomba kunye nokunyusa uzinzo kancinci ngokutshintsha kwezinto.
Itekhnoloji ye-hybrid yangoku incama isantya sokugrumba ngokubeka abasiki kunye nezinto zokuqengqeleka kwiindawo ezingafunekiyo. Itekhnoloji ye-Crush kunye ne-Shear icinga kwakhona kancinci ngokubeka ii-roller cones kwiziko le-bit lokutyunyuzwa ngokukuko kobume kwaye ihambisa abagawuli egxalabeni lokucheba amatye. Ngenxa yoko, isuntswana lonyusa ulawulo, ukuhlala ixesha elide kunye nokufikelela kwinqanaba eliphezulu lokungena.
"Sithathe indlela eyahlukileyo kwitekhnoloji ye-hybrid bit kwaye salungiselela ukubekwa kwe-cutter ukwandisa ukubhola ngokukuko ngelixa sibonelela ngozinzo oluphucukileyo," utshilo uDavid Loveless, usekela mongameli we-Drill Bits kunye neeNkonzo. "Itekhnoloji ye-Crush kunye ne-Shear iyakunceda abaqhubi ukuba baqhube ngokukhawuleza ngolawulo olungcono kwilitye eliqinileyo, amaqula aqhelekileyo wokungcangcazela kunye nokusetyenziswa kwendalo kwe-hybride okanye i-roller cone curve."
Inqaku ngalinye likwahambisa uyilo kwinkqubo yoThengi loMthengi (DatCI), uthungelwano lwasekhaya lweHalliburton lweengcali zokugrumba ezisebenzisana nabaqhubi ukwenza ngokusesikweni iibits zezicelo ezithile zesitya. Kwingingqi ye-Midcon, i-Crush kunye ne-Shear bit incede umqhubi ukuba aligqibe ngempumelelo igophe labo kugqatso olunye-ukufikelela kwi-ROP yeenyawo ezingama-25 / ngeyure ukubetha i-ROP kuseto olungaphezulu kweepesenti ezingama-25. Oku kugcine umthengi ngaphezulu kwe- $ 120,000.